စပစ်ဖိုင်းယားများ ရွှေတောင်ပေါ်ကုမ္ပဏီ ဆက်ရှာမည် | ဧရာဝတီ
ရန်ပိုင်| January 23, 2013 | Hits:3,303
2 | | ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှားပါးနေပြီဖြစ်ပြီး သမိုင်းအရ တန်ဖိုးကြီးသည့် စပစ်ဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ် (ဓာတ်ပုံ- ဗြိတိသျှ တော်ဝင် လေတပ်)
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကျန် စပစ်ဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ်များ မြှုပ်နှံခြင်း မရှိဟု ပြောဆိုမှုများ ရှိသော်လည်း ရွှေတောင်ပေါ် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရှာဖွေမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သိရသည်။
အချိန် နှစ်ပတ်ကြာ စပစ်ဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ်များကို ရှာဖွေရာသော်လည်း တွေ့ရှိသည့် အချက်အလက်များအရ မြှုပ်နှံ ထားခြင်းမရှိဟု ဗြိတိသျှ ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များက ပြည်ပ သတင်းဌာနများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသော်လည်း မြန်မာ ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များအနေဖြင့် ယုံကြည်ဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတွက် ဆက်လက် ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေတောင်ပေါ် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိ သူများက ပြောသည်။
အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးထွန်းကျော်က “တဖက်အဖွဲ့က ဘယ်လိုယုံကြည်ပြီး သတင်းထုတ်တယ်တော့ မသိဘူး၊ မြန်မာ ဘူမိဗေဒ သုတေသီတွေက ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ဆဲပဲ၊ ဆက်ပြီး ဖြစ်နိုင်မယ့် တိုင်းတာနေဆဲပဲ၊ မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းကို ထုတ်ပြန်ဖို့ စောသေးတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းအတွင်း လုပ်ဆောင်ရသည့်အတွက် လုံခြုံရေး၊ မြေနေရာ၊ အချိန် စသည့် ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် အချိန်ယူ ဆောင်ရွက်မှ အောင်မြင်မည်ဟု ယုံကြည်သည်ဟု ဦးထွန်းကျော်က ဆက်ပြောသည်။
လေယာဉ်ပျံများ မရှိဟူသည့် ပြောဆိုမှုမှာ ဗြိတိသျှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ၏ အမြင်သာဖြစ်ပြီး အကျိုးတူ လုပ်ဆောင်သည့် အင်္ဂလန်အဖွဲ့၏ သဘောထားဟု မသတ်မှတ်ပါကြောင်း၊ တူးဖော်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မစ္စတာ ဒေးဗစ်ကန်ဒေါလ်မှာလည်း မိမိတို့နှင့် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ဆဲဟု ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်များကို ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးစ ၁၉၄၆ခုနှစ်ခန့်က အရှေ့တောင်အာရှ စစ်သေနာပတိချုပ် လော့ဒ် မောင်ဘက်တန်၏ အမိန့်ဖြင့် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းအနီး ၃၆ စီး၊ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့အနီး ၁၈ စီးနှင့် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာမှာ ၆ စီး မြှုပ်နှံခဲ့သည်ဟု တူးဖော်ရေးအဖွဲ့က ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။
လေ့လာသူများကမူ စည်းကမ်း စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်တတ်ပြီး ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကို အနိုင်တိုက်ခဲ့သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် အရေးပါ သည် စစ်လေယာဉ်များကို မြေပုံညွှန်းဖြင့် တိတိကျကျ မြုပ်နှံခဲ့လိမ့်မည်ဟု ယူဆကြောင်း၊ သို့သော် ယခုလက်ရှိ တူးဖော် နေသည့် အခြေအနေမှာ အကြားသတင်းများအရ သိုက်တူးသကဲ့သို့ တူးဖော်နေသည့် ပုံစံဖြစ်နေကြောင်း ဝေဖန်သည်။
မကြာသေးမီရက်ပိုင်းက ပြည်တွင်းအခြေစိုက် မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းဌာနက ရေးသားသည့် သတင်းတပုဒ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက စပစ်ဖိုင်းယား လေယာဉ်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြှုပ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုသွားသည်။
တယောက်စီး စပစ်ဖိုင်းယားတိုက်လေယာဉ်များမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဗြိတိန်လေကြောင်း တိုက်ပွဲတွင် ဂျာမန် တိုက်လေယာဉ်များနှင့် ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ရန်မှ ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်ဟု ထင်ရှားသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှားပါးနေပြီဖြစ်ပြီး သမိုင်းအရ တန်ဖိုးကြီးသည် စပစ်ဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ်များ ရှာဖွေရေးကို အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်စဉ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သဘောတူညီခဲ့သည်။
အကယ်၍ လေယာဉ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက မြန်မာအစိုးရက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရွှေတောင်ပေါ် ကုမ္ပဏီက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လေယာဉ်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေသော ဒေးဗစ် ကန်ဒေါလ်က ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ခံစားခွင့်ရမည်ဟု သဘောတူကာ စာချုပ်ချုပ်ဆို လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ စစ်မြေပြင်ဖြစ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်နှင့် ဂျပန်တို့ မြုပ်နှံခဲ့သည့် ရတနာသိုက်များ၊ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ ရှိကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်တတ်ပြီး၊ အစိုးရကလည်း တူးဖော်လိုသော သူများကို ခွင့်ပြုကာ လုပ်ဆောင်နေမှုများ မကြာခဏတွေ့ရသည်။
စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ပြန်ဖွဲ့ပြီ
မြန်မာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မြင့်တက်လာဟု RSF ထုတ်ပြန်
ရိုးမ ဘဏ်ကို အပစ်ရပ် ရှမ်းတပ် ဆက်ကြေးတောင်း
ကျောင်းတွင်းဖြန့် စာစောင်ကို စိစစ်မည် ဆိုသောကြောင့် ဆက်ထုတ်ရန် အခက်တွေ့
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Nwar Kyaungthar January 24, 2013 - 1:11 am	GET A REAL JOB.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 24, 2013 - 3:18 am	Pirates of the Carribean ရုပ်ရှင်ထဲက Captain Jack Sparro ကို ခေါ်ပြီး ရှာ တူးခိုင်းလေ။
Reply	အောင်မျိုးမြတ် January 24, 2013 - 4:43 pm	မြန်မာတိုင်းရင်းသူရေ…မြန်မာလိုတစ်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုတစ်လုံးမပြောပါနဲ့လား။ Caribbean ပါ..
ခင်ဗျားပြောတဲ့ Carribean မဟုတ်ပါဘူး။စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ်။သေချာလေ့လာပြီးမှရေးရင် ပိုကောင်းမယ်နော်။ပြီးတော့(Captain Jack Sparro)မဟုတ်ပါ-အမှန်က
Captain Jack Sparrow….ခင် ဗျားရေးထားတာက(W)မပါဘူးဗျာ..သေချာလေ့လာပါဦးနော်။ သရုပ်ဆောင်က-ဂျော်(ရ်)နီဒပ့် Johnny Depp…သေချာအောင်ပြောမယ်နော်…ကျွန်တော်ကခု
ကသူငယ်ချင်း တွေရှိတယ်…သူတို့က.(johnnyDeep)ကို.ဂျော်(ရ်)နီဒပ်လို့အသံထွက်တယ်…နိုင်ငံခြားလိုရေးမယ်ဆိုရင်လည်းသေ ချာလေ့လာပါနော်။
Reply	castle January 25, 2013 - 11:24 pm	ကိုအောင်မျိုးမြတ်ရေသူများကိုဝေဖန်တာတော့မကောင်းပါဘူးဗျာ။ရှားပါးနေတဲ့uniquic ရှာရတာခကာတယ်လေ။
အလဲဗင်း အယ်ဒီတာ ၁၇ ဦးကို တရားရုံး မထီမြင်ပြုမှုဖြင့် ပြန်ကြားရေးက တရားစွဲ
MJN ဦးဆောင်သည့် မီဒီယာလှုပ်ရှားမှု မီဒီယာ ၆ ခု စတင် ပူးပေါင်း
သံတော်ဆင့် ဂျာနယ် အမှု ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကို စတင် စစ်ဆေး
ဂျာနယ်လစ်များအား အရေးယူ ထောင်ချသည့် ထိပ်တန်း ၁၀ နိုင်ငံ မြန်မာ ပါဝင်
CPJ ၏ နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆု ဦးအောင်ဇော် လက်ခံရယူ